Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neTabex-Yeka ukutshaya ngoku!
Konke malunga neTabex-Onke amayeza endalo anokukunceda uyeke ukutshaya
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neTabex
Ngaphezulu kweminyaka engama-50 iTabex incede izigidi eMpuma Yurophu ukuba ziyeke ukutshaya ngendlela ekhuselekileyo kunye nendalo. Kwiikota ezikude ze-1865. U-Orehov ufumanise kwaye wahlalutya i-alkaloid cytisine equlethwe kwi-Family Papilionaceae kwaye yeyona nto iphambili kwi-Tabex®. I-Cytisine yeqela le-nicotine blockers ezaziwa ngokuziqhelanisa nezikhuthazi zokuphefumla. Uhlalutyo lwe-pharmacological cytisine kwisebe le-pharmacology le-Sofia Medical Institute laqala kwangoko ukusuka kwi-50s yenkulungwane ephelileyo kwaye injongo yabo yayikukudala ifom yedosi kwiimfuno zokuvuselelwa. Ngexesha lokuvavanywa kweekati ezingafakwanga emzimbeni, oosomachiza abaziwayo ababini baseBulgaria
UNjingalwazi Paskov kunye noGqirha Dobrev bafikelele kwisigqibo esibalulekileyo sokuba ngenxa yetyhefu esezantsi kune-nicotine kwaye ubukhulu becala kwimpembelelo yayo ebuthathaka kwinkqubo ye-cytisine yentliziyo ye-cytisine inokusetyenziswa njengesixhobo sokuyeka ukutshaya kuba inxibelelana nezamkeli ezifanayo ebantwini. umzimba kunye nenicotine. Into ebangela umdla kweli bali kukuba kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo oosomachiza abatshayayo abaphambili babembono omnandi ngendlela yokunika ithuba abantu abaxhomekeke kwicuba ukuba bahambe ngokulula kwisifo sokuyeka, ngokuhamba nexesha lokumisa umdiza kwaye kwangaxeshanye Ukuziva ukhuthazekile, njenge-cytisine ngaphezu koko iqinisekisile ukungasebenzi kakuhle kwamathumbu.
Ngo-1962 eBulgaria uProfesa Isaev wahlukanisa i-cytisine kwisityalo esine-chain chain yegolide kwaye waqala uphando olunzulu malunga nokuveliswa kwemveliso yokuqala yonyango iTabex®. Izifundo ezikhulu zeklinikhi eBulgaria, eJamani nasePoland zalandela oko kwaqinisekisa ukusebenza kwayo kwaye uninzi lwazo zonke iimfuno zesimo sengqondo esifanelekileyo kwimizamo yokuphelisa. Kuyaziwa ukuba imeko yeemvakalelo kunye nokuziyeka ziimeko zengqondo, ezihamba nokuxhomekeka okuthile, ekunzima ukohlula. Isifundo seklinikhi esenziwe eBulgaria naphesheya kweelwandle siqinisekisile olu ncedo lweTabex.
Isebenza njani iTabex ngaphakathi kwengqondo yakho? Uyisebenzisa kanjani iTabex Izifundo zonyango kwiTabex Malunga noMthi weLaburnum